Elena Kalinina - एक अविश्वसनीय सुन्दर केटी र माग अभिनेत्री। यो राम्रो चलचित्र मा पायो कसरी जान्न चाहनुहुन्छ? त्यहाँ कानुनी रूपमा विवाह हुनेछ? यी र अन्य प्रश्नहरूको जवाफ लेख मा निहित छन्।
जीवनी: बाल्यकाल र किशोरावस्था
Kalinina Elena Aleksandrovna 1978 (22 फेब्रुअरी) मा रूसी राजधानी मा जन्म भएको थियो। त्यो एक आदरणीय र शिक्षित परिवार आउँछ। को थिएटर चरण र सिनेमा गर्न lena पिता र आमा सम्बन्धित छैन। तर तिनीहरूले सधैं तिनीहरूले भविष्यमा कलाकार वृद्धि थाह थियो।
नियमित विद्यालय धाउन elena Kalinina मास्को। उनको मनपर्ने बिषय चित्रकला थिए, संगीत र साहित्य। ठूलो गद्य देखि लामो कविता र अंशहरूको memorizing कठिनाई बिना केटी। सिलाई, नृत्य र रेखाचित्र - lena विभिन्न क्लब गए।
केटी अवैतनिक प्रतियोगिताहरु मा भाग लिए। त्यो दर्शक मा मान्छे को उत्साही अनुहार हेर्न र आफ्नो ताली सुन्न मन परायो।
अध्ययन र थिएटर मा काम
Elena Kalinina - अभिनेत्री, मास्को मा जन्म भएको थियो जो, तर सेन्ट पीटर्सबर्ग जान शिक्षित गर्न। विश्वस्त र प्रतिभाशाली केटी थिएटर कला को एकेडेमी प्रवेश गर्न पहिलो पटक दायाँ व्यवस्थित। 2000 मा, त्यो स्नातक एक उपाधि सम्मानित गरिएको थियो।
लगभग तुरुन्तै युवा अभिनेत्री को MALY नाटक थिएटर, उत्तरी राजधानी स्थित को troupe मा स्वीकार गरे। यो संस्थाले को चरण मा, हाम्रो हेरोइन विभिन्न प्रदर्शन मा भाग छ। जो भर्खरै Elena Kalinina प्ले भएन। अभिनेत्री को उत्पादन मा Regan को छवि मा प्रयास "राजा Lear।" र "द नजिकै" मा त्यो Darya Pavlovna को भूमिका मिल्यो।
जब यो पहिलो Elena Kalinina को स्क्रीन मा देखियो? यो 2006 मा फिर्ता भयो। को गोरा फिल्म एउटा सानो भूमिका थियो "आफु -। पराई"
2007 मा Kalinin लोकप्रिय श्रृंखला "धन्य साथ" (टीएनटी) मा "माथि रोशनी"। त्यो चाची विकी प्ले। त्यो छवि जीवन्त र विश्वास गर्न सकिने थियो सिर्जना, तर दर्शक यसलाई व्यावहारिक कण्ठ। अझै पनि - त्यो केवल श्रृंखला 2-3 मा तारा अङ्कित किनभने।
2008 देखि 2011 को अवधि मा Elena Kalinina संग केहि तस्वीर बायाँ। यसको सबैभन्दा ज्वलन्त र रोचक भूमिकाको सूची:
"सामान्य चिकित्सा" (2008) - चिकित्सक अल्ट्रासाउंड;
"Barvikha" (टी वी श्रृंखला) (2009) - गायक;
"एक दिन प्रेम हुनेछ" (2009) - ईवा, माइकल को पत्नी;
"स्टेटजोन्स wort-2" (टी वी श्रृंखला) (2010) - मुख्य भूमिका;
"मास्को। तीन स्टेशन "(2011) - अन्वेषक युलिया Alexandrovna।
"मेरो मात्र पाप"
Elenoy Kalininoy सम्पर्क निर्देशक Karine Foliyants संग 2011 को अन्त्यमा। त्यो जवान अभिनेत्री सहयोग प्रस्ताव राखे। Lena ध्यान लिपि अध्ययन छ र श्रृंखला को फिलिम मा भाग लिन सहमत "मेरो मात्र पाप।" 2012 मा, चित्रकला दर्शक अदालत प्रस्तुत गरिएको थियो।
Elena Kalinina मुख्य महिला भूमिका गए। उनको वर्ण (मेरिना) - एक आकर्षक उपस्थिति र एक जटिल भाग्य संग एक केटी। त्यो उनको पति को हत्या को लागि जेल मा थियो। आफ्नो रिलीज पछि, मेरिना सफा स्लेट संग जीवन सुरु हुन्छ। मुख्य पात्र एउटा सम्पन्न गाउँ जान्छ।
को गोरा सौन्दर्य को उपस्थिति unnoticed जाने छैन। धेरै मानिसहरू यो ध्यान। पत्रुसको 65 वर्षीया बुबा र आफ्नो कान्छो छोरा अलेक्जेन्डर - तर केटी मन लागि युद्धमा पनि Chernov परिवारको दुई प्रतिनिधिहरु बीच सेट गरिएको छ। जसलाई मुख्य पात्र चयन गर्नेछ? यदि तपाईं अन्त गर्न सुरुदेखि शो हेर्न यो जान्न हुनेछ।
फिल्म को सफलता पछि "मेरो मात्र पाप 'सहयोगको लागि प्रस्ताव देखि भने लीना गर्न गिर एक cornucopia। केटी उच्च शुल्क chasing छैन। उनको लागि, यो महत्वपूर्ण भूमिका संख्या, र आफ्नो गुणस्तर छैन छ। 2012 मा, त्यो अन्वेषक प्ले युलिया Kalinina टिभी श्रृंखला "शेरिफ-2" मा। चाँडै स्क्रीन मा उनको सहभागिता अर्को फिलिम जारी - "rocking" (2016)।
Elena Kalinina (अभिनेत्री): व्यक्तिगत जीवन
को गोरा सौन्दर्य मा कहिल्यै पुरुष ध्यान को कमी सम्बन्धित समस्या भएको छ। र उच्च विद्यालय, र मान्छे को संस्थान मा यो हेरविचार। तर हाम्रो हेरोइन छैन क्षणिक romances रुचि छ। Lena एक प्रिय मानिस संग एक गम्भीर सम्बन्ध निर्माण गर्न चाहन्थे। तबसम्म बादल मडारिरहेको एक योग्य चुनौती छैन मा, सौन्दर्य आफु अध्ययन र पेसा बनाउन समर्पित।
त्यो एक सुन्दर र शिक्षित युवक भेटे पछि lena व्यक्तिगत जीवन समायोजित थियो। उनको रोजेको नाम, पावेल Gryaznov छ। उहाँले सानो नाटक थिएटर को एक कलाकार छ। सुरुमा, जोडी एक नागरिक विवाह बस्थे। त्यसपछि मान्नेहरूले सम्बन्ध formalize गर्न रजिस्ट्री कार्यालय गए।
Lena र धेरै वर्ष को लागि पावलले पहिले नै कानुनी रूपमा विवाह गरे। धेरै परिवार जस्तै, तिनीहरूले quarrels र गलत अर्थ उत्पन्न। तर सम्भव सधैं जोडी एक समझौता पुग्न। क्षणमा तिनीहरूले सँगै बाँचिरहेका छौं। बच्चाहरु छैन।
अब त्यो जन्म भएको थियो जहाँ तपाईं थाहा, अध्ययन र जो फिल्म Elena Kalinina गोली थियो। आज त्यो मायालु पति, राम्रो काम र राम्रो घर छ। पूर्ण आनन्द लागि पर्याप्त बस साना बच्चाहरु छैन।
छोटो चलचित्र "यो Penkovo मा भयो"। अभिनेता र भूमिकाको
सर्वश्रेष्ठ डेल्टा होटल4* (स्पेन / मलोर्का): फोटो र समीक्षा
मार्क्सवाद भनेको हो र यो कस्तो खतरनाक छ?
'Ibufen' छोराछोरीलाई - यो निर्देशन शीघ्र आवेदन मोड
Upvel राउटर कन्फिगर गर्दै: चरण निर्देशनहरू द्वारा कदम। अपवल राउटरको मोडेल